I-Miniature Circuit Breaker (MCB) Abakhiqizi & Abahlinzeki - China Miniature Circuit Breaker (MCB) Factory
Ama-miniaturecircuit breakersDAB7-63Hare eyenzelwe ukuhlinzeka ngokunqanyulwa komthombo wamandla othomathikhi ngaphansi kwemisinga eyeqile.Inconyelwa ukuthi isetshenziswe kumapaneli weqembu (ifulethi naphansi) namabhodi okusabalalisa ezakhiwo zokuhlala, zasekhaya, ezomphakathi nezokuphatha.
Izinto ezingama-64 ngemisinga engu-8 elinganisiwe esukela ku-6 kuye ku-63 A. Le MCB isitholakele isitifiketi se-ASTA, SEMKO, CB, CE.
I-DAB6-63 yenzelwe ukuvikela ukusatshalaliswa nezinhlelo zeqembu ezinemithwalo ehlukile:
- izinto zikagesi, ukukhanyisa - V ukushintshwa kwesici;
- Ukushayela ngemisinga yokuqala ngokulingene (i-compressor, iqembu labalandeli) - Ukushintsha kwesici sika-C;
- Ukushayela ngemisinga yokuqala ephezulu (izindlela zokuphakamisa, amaphampu) - Ukushintsha kwesici sika-D;
I-breaker miniature breaker DAB6-63 inconyelwa ukuthi isetshenziswe kumapaneli wokusabalalisa kagesi wezakhiwo zokuhlala nezomphakathi.
I-DAB7N-40 Series miniature circuit breaker isebenzisa iphuzu lokuphinda kabili le-1P + N, izingongolo ezimbili zifakwe futhi zahlukaniswa zodwa, ngaphansi kokusebenza okuvumelanayo, i-N-pole njalo izokwenza kuqala futhi iphule ngokuhamba kwesikhathi, eqinisekisa amandla okuphuka kwe-arc kagesi isigxobo esivikelwe, futhi siqinisekisa ukuphepha kwamasekethe alawulwayo nemishini kagesi.
I-DAB6-100 yohlelo lokusebenza iyizici ezinjengokubukeka okuntekenteke, isisindo esincane, ukusebenza okuhle kakhulu nokunokwethenjelwa, amandla okuphuka okuphezulu, ukukhubeka okusheshayo nokufakwa yisitimela. Indawo ebiyelweyo kanye nezihlanganisi zayo zisebenzisa ipulasitiki ephezulu yokulinda umlilo nokushaqeka okumelana nokuqina isikhathi eside. Ikakhulu isebenza ukuvikela amasekethe we-AC 50Hz, i-230V yesigxobo esisodwa, i-400V yezingongolo ezimbili noma ezintathu noma ezine ezinepoli kusuka kugcwala ngokweqile noma isekhethi elifushane, kanye nokwenziwa okungajwayelekile nokuphula izinto zikagesi ne-lig ...
I-DAB7-63 DC encane Breaker Breaker
Ama-breaker wesekeli amancane i-DAB7-63H enzelwe ukuhlinzekela ukunqanyulwa komthombo wamandla othomathikhi ngaphansi kwemisinga eyeqile.Anconywa ukuthi asetshenziswe kumapaneli weqembu (efulethini naphansi) nasemabhodini okusabalalisa ezakhiwo zokuhlala, zasekhaya, ezomphakathi nezokuphatha.
Ngezinhloso zezimboni nezentengiso
Izidingo Zokusatshalaliswa Kukagesi ziyaqhubeka ngokuqhubekayo emikhakheni yezokuhlala, yezohwebo neyezezimboni. Ukuphepha kokusebenza okuthuthukisiwe, ukuqhubeka kwensiza, ukusebenziseka kalula okukhulu kanye nezindleko zokusebenza kuthathe ukubaluleka okukhulu. Ama-Breaker Breaker amancane aklanyelwe ukwamukela ngokuqhubekayo kulezi zidingo eziguqukayo.
I-DAB7-100 8kA MCB Shintsha i-Miniature Circuit Breaker
I-DAB7-100 mini breaker breaker yathuthukiswa ikakhulukazi kumazinga we-GB 10963 ne-IEC60898. Ama-breaker wesifunda aziqhayisa ngokuqina okuvelele, ukuvikelwa kwesifunda okufishane, ukuvikelwa kokugcwala ngokweqile, isikhathi esifushane sokuvula, kanye nenkomba yamandla okuphuka okuphezulu konke kudizayini eyodwa encane.
Ama-breaker wesifunda afakelwe ukuvikela ngokweqile othintana nabo, ama-relays, neminye imishini kagesi.
Imisebenzi eyinhloko: ukuvikelwa kwesifunda okufushane, ukuvikela ngokweqile, nokuhlukaniswa ngogesi.